चीन-भारतः लद्दाखमा किन भईरहेको छ तनाव ? - Online Dainik
चीन-भारतः लद्दाखमा किन भईरहेको छ तनाव ?
एजेन्सी । चीन र भारतको सीमार्वती क्षेत्र लद्दाखमा चिनियाँ सैनिकले फायर खोलेपछि दुई देशबीचको तनाव थप पेचिलो बनेको छ।
सोमबार राति लद्दाखको प्याङोङ लेकमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले हवाइ फायर गरेको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको छ। चिनियाँ पक्षले भने भारतीय पक्षले 'लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल' (एलएसी) मा अवाञ्छित 'मुभ' गरेपछि प्रतिक्रिया जनाउनु परेको जनाएको छ।
भारतको सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै इन्डिया टूडेले 'भारतीय पक्षले पनि जवाफी फायर खोलेपछि अहिले प्याङोङ क्षेत्रको अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको' उल्लेख गरेको छ।
भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीको अनलाइन संस्करणले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, "भारत अवैधानिक तवरले एलएसी क्रस गरेर प्याङोङ लेक र सेन्पाओ माउन्टेन क्षेत्रमा पुगेको देखिएको छ।
यो गलत मनासयले गरिएको गम्भीर उक्सावट हो। हामी भारतीय पक्षलाई यस्तो कार्य तत्काल रोक्न र गम्भीर परिस्थिति सिर्जना नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं।"
तर भारतीय पक्षले भने चीनको उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ।
यो घटना भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच रुसको राजधानी मस्कोमा हुने भेटवार्ताको दुई दिनअघि घटेको छ। १० सेप्टेम्बरदेखि शुरु हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकका लागि दुवै नेता मस्को जाँदैछन्।
भारतीय अनलाइन संस्था वानइन्डियाका अनुसार विदेशमन्त्री एस. जयशंकर चाइना डेस्कका प्रमुखसहित मस्कोका लागि हिँडिसकेका छन्।
सन् १९६२ देखि शुरु दुई देशबीचको सीमा विवाद पछिल्लो समय तनावपूर्ण बन्दै आइरहेको छ।
लद्दाख क्षेत्रको गलवान भ्यालीलगायत ३८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र चीनले अतिक्रमण गरेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ भने चीनले उक्त क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।
सोही समयमा भएको युद्धपश्चात उक्त क्षेत्रमा दुवै पक्षको सेनाले फायर नखोल्ने सहमति भएको थियो।
बीचमा तनाव हुँदै आएपनि मानविय क्षति भने भएको थिएन।
तर गएको १५ जुनमा 'लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल' को विषयलाई लिएर दुई देशका सैनिकहरूबीच झडप हुँदा २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने चिनियाँ पक्षका केही हताहत भएको भनिएको थियो। यद्यपि, अहिलेसम्म चीनतर्फ कति क्षति भएको थियो भन्ने खुलेको छैन।
त्यसपछि सोमबार राति ४५ वर्षपछि पहिलो पटक हवाइ फायर भएको हो।
प्रकाशित मिति :भाद्र २३, २०७७ मंगलवार - १७:३५:१५ बजे
रसियन भ्याकसिन 'स्पुतनिक-५'को परीक्षण भारतमा पनि हुँदै
अमेरिकामा ४ महिनामा मृतकको सङ्ख्या ४ लाख नाघ्ने प्रक्षेपण